Manamboara Polygon mifototra amin'ny bearings sy ny halavirana ao amin'ny latabatra Excel - Geofumadas
Septambra, 2008 AutoCAD-Autodesk, Downloads, Microstation-Bentley, topografia
Andeha hojerentsika hoe inona no tanjona:
Manana ny angon-drakitra mivezivezy miaraka amina bearings sy lavitra aho, ary tiako hamboarina ao amin'ny AutoCAD na Microstation. Hitanay teo aloha izany AutoCAD Manana ny endriny izany hamahana an'ity karazana data ity eo ambanin'ny endrika @dist <raha ao amin'ny Microstation dia vita izy io amin'ny AccuDraw.
Eny, ho valin'ny Jak rahalahintsika, ity ny latabatra:
1. Ny angona fidirana
Niditra tao ambanin'ilay faritra mavo izy ireo, eto dia miditra ny toerana, ny halavirana ary ny lohatenin'ny ohatra.
2. Ny fandrindrana voalohany
Ity dia eo amin'ny lohatenin'ny faritra amin'ny maitso, amin'ny fiheverana fa fantatsika ny fandrindrana ny teboka voalohany. Raha tsy manana ianao dia apetraho ny sandany, aleo avo indrindra mba tsy hiseho ny fandrindrana ratsy, toy ny 5,000 (dimy arivo)
3. Ny angona vokarina
Ity dia faritra voamarika amam-bozaka, izay anananao dia ny kofehy x sy y mifamatotra amin'ny takelaka fisintonana.
4. Ahoana ny fandefasana izany amin'ny AutoCAD.
Tsotra, ny "kopia" dia atao amin'ny faritra volomboasary ao amin'ny fisie excel, avy eo ao amin'ny AutoCAD dia averina ny baiko polyline (pline) ary "apetaka" no atao ao amin'ny bara fandidiana. Ny valiny dia ny fitetezana ny lalana mba hanomezana ny teboka famaranana
Eto ianao dia afaka mandefa ny môdelina hanangana polygones mifototra amin'ny angona sy ny elanelana eo amin'ny latabatra Excel.
Mila fandraisana anjara an'ohatra ho an'ny fisintomana izay azonao atao Karatra karta na Paypal.
5. Ahoana ny fandefasana izany amin'ny Microstation
Mba hanaovana izany amin'ny Microstation dia namorona môdely iray izay manao zavatra mitovy, fa ao amin'ny lojikan'ny baiko Microstation Key-in.
Jereo ny môdelin'ny Microstation.
Previous Post«Previous Ampidiro ny angona sy ny halavirana ao amin'ny mikrosta
Next Post Topolojika manadihady amin'ny Geographics mikrostationmanaraka »
56 Mamaly ny "Manangana polygon mifototra amin'ny bearings sy ny halavirana ao amin'ny latabatra Excel"
Jereo ny mailaka, na ny tsy mila, dia tonga ny url download.
Efa manao ny fandraisan'anjara, Ahoana no fandefasana ny rakitra?
Avy eo dia tsy maintsy manao izany ianao amin'ny Paypal.
Anstacio Montoya hoy izy:
Salama hariva izay, tsy afaka nanao ny famindrana aho noho ny tsy fahampian'ny adiresy ny orinasa izay hiarahabana
El article link dia manondro ny safidy handoavana ny banky,
Tsy nahavita azy aho. Raha tsy miseho izy dia ampiasao ny F5 mba hamandoana azy.
salama tsara alim-bolana toy ny fandoavam-bola amin'ny famindrana raha manao izany mivantana any amin'ny banky izay kaonty nomeko ny nomerao noho ny fiarahabana tiako
Jereo ny mailanao, indraindray dia mandeha amin'ny spam.
Tokony hahazo hafatra miaraka amin'ny url iray Download ianao, izay miala amin'ny andro 4.
Raha manana olana ianao, dia lazao aminay ny editor (at) geofumadas.com
Alex Mor hoy izy:
Nandoa vola tamin'ny paypal aho. Aiza no azoko atoraka ny môdely?
Eduardo Henriquez hoy izy:
Desambra, 2013 ao
Te-hiteny aminao aho handefa vola amin'ny Paypal amin'ny anaranao ho an'ny tempolin'i Excel
Arturo Salinas hoy izy:
Tena tsara, ampiasain'ny ArcGIS cogo ampiasaina
Tsy maintsy mampiasa fampitahana ianao ao Excel, fa mampiasa ny Line Line.
Ampidino ao anaty rakitra txt ianao ary miantsoa azy amin'ny Keyin
Ao amin'ity lahatsoratra ity, manazava ny fomba.
cmv hoy izy:
Misaotra ny rehetra ary mankasitraka ity asa tsara ity.
Manana fanontaniana aho
Ahoana no ataoko ao amin'ny MICROSTATION mba tsy hamelako fotsiny ny rahona marika, fa koa ny andalana izay mety hahatonga ny polygonal?
Candy hoy izy:
Tsara tarehy tsara tarehy !! Ianao no voavonjy!
Novambra, 2011 at
Ao amin'ity lahatsoratra hafa ity dia namoaka fomba hafa hanaovana izany amin'ny Microstation aho, amin'ny fampiasana ny fifanarahana ao Excel fa tsy ny txt file
da hoy izy:
Misy olona mahafantatra ny fomba hiditra ny angona angona avy hatrany?
Marina fa afaka miasa amin'ny programa rehetra izay manaiky ny fisoratana ao anatin'io endrika io.
Mety misy ny fanitarana ny ArcGIS, saingy mbola tsy niresaka momba izany lohahevitra izany aho.
davarangany hoy izy:
Miarahaba, ahy fotsiny afa-tsy ny fiainana miaraka ity lahatsoratra ity, dia mila manao marolafy ao ArcGIS ka mampiasa fomba izany, ary antonona ho an'ny ArcMap ihany, fa tsy raha nisy fomba mora kokoa ny manao izany fandaharana, na raha efa namoaka ny sasany lahatsoratra mikasika izany, fa Hey nanampy ahy be dia be, dia ho tsara ihany koa ny hametraka ny lahatsoratra tanteraka ny ArcGIS. Na izany na tsy misaotra betsaka !!!!!! Arahabaina eto amin'ity pejy ity, saludooooos.
Willy hoy izy:
Raha mila fanampiana, raha izao sisa ny polygon… ^ _ ^
Manova izany ao amin'ny Windows
Atombohy, fanaraha-maso, toerana
Avy eo dia misafidy ny firenena misy anao ianao ary miaraka amin'ireto dia tokony hanana teboka marina sy commas any amin'ny faritra mena, eto ambany misy ireo ohatra. Voalohany dia misy isa.
Raha tsy misy diso, na dia misafidy ny firenenao aza, dia tsindrio ny bokotra "ataovy" ary asio fanovana ny endrika fifanaingoana ary mariky ny fisarahana an'arivony.
Manana olana aho hamoahana ny sary amin'ny autocad, ny olana dia miparitaka amin'ireto manaraka ireto.
Ny olana dia eo amin'ny latabatra fanandevozana ao amin'ny biraoko mila mila mahafantatra ny fomba hanovana ny takelaka (,) amin'ny Point (.) Manana birao 2007 aho.
Toa izao manaraka izao izany:
izay misy fe-potoana (.) misy koma (,) manampy ahy azafady. !!
Eferrari hoy izy:
Oktobra, 2010 ao
Salama daholo, manana taona maro aho amin'ny fampiasana MicroStation ho an'ny kadastre ary te hanampy fotsiny amin'ny fanomezana soa ho an'ny mpiara-miasa fa raha te hanampy izy ireo ho fanampin'ireo teboka polygon, dia tsotra be ny fomba. Ao amin'ny takelaka an-tsoratra amin'ny lohateny dia manoratra "toerana smartline" isika, isaky ny mandrindra dia ampidirintsika xy = x mandrindra, y mandrindra. dia toy izany amin'ny rehetra. Amin'ny fidirana Key-in dia manoratra @C: \_ anarana sy ny toerana misy ny file.txt Izay no teoria amin'ny fomba fiasa raha misy olona mahalala fomba hafa dia hankasitraka ny fidirana.
Aogositra, 2010 at
Mazava ho azy fa ny baiko dia X - Y
francisco hernandez barrona hoy izy:
Mila manao drafitra any amin'ny autocad aho .. satria miditra ny fandrindrana sy ny x ary izaho no hitifitra ilay fiaramanidina
Ivan hoy izy:
Misaotra ny rahalahy noho ny fanampiana, tena mahavonjy asa betsaka amin'ity tabilao ity aho, miarahaba ny fampandrosoana ny formulas, asa tena tsara.
Juan Luis Córdova hoy izy:
Tsy nahita ny v8i aho
v8 xm famoahana
Inona no dikan-teny anananao?
V8 na V8i
Ahoana ny momba izany, efa manana ny tranokala mikrostation aho, tsy fantatro raha afaka manampy ahy amin'ny fomba fitsaboana ianao ary manandrana kely fa misy fitaovana marobe.
Misaotra ny ankizilahy mitady ny tranokala mikrostation ary ankatoavin'ny ankizilahy
Ny fananganana latabatra sy elanelana dia manerana ny tranokala Microstation, toy ny tsy vitanao irery ihany amin'ny AutoCAD afa-tsy mpiasa ihany.
Saingy afaka manao ny dingam-pifamoivoizana amin'ity lahatsoratra ity ianao miaraka amin'io latabatra ambony io
Tsara Hitako ho mahaliana, rehefa hamaha, manana olana aho tsy afaka mahazo boaty fanorenana (bearings sy lavitra) ny lafy sy realizadaen MicroStation v8 xm na v8i, toy ny atao amin'ny Civilcad tebas ny fitaovana ihany marolafy ary hanome manamboatra tabilao fanorenana sy tsipika ao anatin'ilay sary na pligonal, izy ireo dia hanafika azy ireo dia hanampy ahy
Tsy nahita lisp aho izay manao izany, ilay afaka manampy anao is this . Tsy misy tenimiafina ny kaody, ka atakaloo izany ka omenao anao ny fampahalalana hafa, na avelanao ao amin'ny tsanganana fandinihana miaraka amin'ny fiasan'ny fehezan-javatra izany.
Faviano hoy izy:
Misaotra, fa mihevitra aho fa mila miezaka manazava zavatra iray, tiako ny tsy hanao izany amin'ny fomba manerantany, izany dia manamboatra mampiasa Lips, manondro ny angon-drakitra misintona ny dossier excel.
Eny, azoko fa raha raha tsy izany dia tsy misy afa-tsy:
- Tsipika baiko
ary avy eo mametraka ny angona an-tongotra ho toy ny lahatsoratra.
Miarahaba anao aho na ny fandraisana anjara Q DAS SO ity pejy ity INTERERESANTE. TSARA te ho fantatra raha afaka manampy graphed Ireo antontan-kevitra ANY Excel AutoCAD, ME Manaova LINE AMIN'NY REHETRA INFORMATION ID, Faritany tampon-LINE, Length, Azimuth sy fanirian (incl) avy amin'ny XY fiaramanidina.
HO AN'NY OLONA IANAO.
KELY FAHAFATESANA MAHAFINY VOLA. »« AZIMUT »« INCL. »
Ing. Hugo Alarcón hoy izy:
Miarahaba anao aho, pejy tsara izy io ary ambonin'izany rehetra izany miaraka amin'ny fampahalalana tena ilaina be dia be ho antsika izay manolo-tena ho an'ity topografia sy geodesy ity ...
Izaho koa dia nanamarina ny fampahalalana anananao momba ny fampiasana jeografia (na gedesics) sy UTM ... sahirana kely aho amin'ny fanovana avy amin'ny Geographique mankany amin'ny Topographic, izany hoe te-hiova avy amin'ny geodesics ho amin'ny rafitra fisaka aho, amin'ny fomba izay ireo teboka na zoro izay napetrakay sy namboarinay aorian'izay, azonay ampiasaina amin'ny gara tanteraka na fitaovana mahazatra rehetra ary ny elanelana lavitra na ny fifanandrifian-javatra ... tena manampy tokoa ny hevitrao ... misaotra sy arahaba avy tampico, tamaulipas, mexico ...
ary ny fandrindrana dia amin'ny geografika na utm?
jeijchang hoy izy:
namana tsara tiako ho fantatrao raha afaka manampy ahy ianao satria afaka mandrindra ny fandrindrana amin'ny gps ho autocad aho
Raha izany no izy, angamba angamba ny manamarina ao amin'ny sehatry ny fifehezana, ny toerana, ary jereo raha toa ny koma dia toy ny mpisintaka an'arivony ary ny teboka efapolo.
Josoa hoy izy:
fantatrao fa mieritreritra aho fa ny olana dia miankina amin'ny fametrahana ny koma sy ny fe-potoana…. avy amin'ny excel
ahhhhhhhh pejy tsara huh ...
ok misaotra, nilamina tsara ny zava-drehetra….
marina ny anao ny lesoka dia ny mandika tsy marina ny angon-drakitra ... fisaorana an'arivony ...
Jereo tsara ny filaharan'ny zavatra ataonao:
Fepetra mifehy (na tsipika)
Mifantina ny faritra manintona
Tsindrio amin'ny tsipika baiko AutoCAD
Joshua hoy izy:
Tsy diso aho raha nandoka ny data marina, misy zava-mitranga, ah manana format hafa ankoatrako aho tena mahomby amin'ny fanaovana alignment ao anaty portfolio dia mitovy amin'ity endrika ity fa amin'ny lafiny roa dia azoko ity hafatra ity »Tondro 2d na teny fanalahidy safidy takiana» rehefa mankany amin'ny tany autodesk aho, tsy azoko ?.
Raha te handefa ilay endrika amin'ny excel ianao dia soraty ny mailakao….
tena mahaliana ..
AAA RAHA HITANAO VAHAOLANA IZAO OLANA IZAO, aparitaho ny teny….
Manana endrika hafa mitovy amin'ity iray ity aho, ny manamboatra làlana ary mankeny amin'ny tany autodesk. Mitovy be amin'ity endrika ity, efa nampiasa ny format izay ananako aho ary tsara ho ahy io ary avy eo nahazo ilay hafatra hoe "teboka 2d na teny lakile safidy ilaina" ary tsy miseho ny polygon-ko, ary tsy manao hadisoana amin'ny fakana tahaka ny data. RAHA Te hanome anao ny rakitra ao amin'ny EXCEL ianao dia soraty ny mailakao …….
AAA MBOLA MBOLA HITANAO VAHAOLANA IANAO, ATAONAO NY LEO, TSY FANTATRAO FA NY OLANA NO FANORENANA CAD AUTO SA TSY MISY TSY MISY TSY MAFY AMIN'NY EXCEL….
Josoa, mino aho fa ianao dia maka tahaka ny faritra tsy mety, tsy maintsy kopia izay misy marika
Ny teboka 2d na ny teny lakile safidy ilaina dia miseho ihany koa amiko ary tsy mahita vahaolana aho raha fantatrao izany, azafady mba ampio aho, maika, azafady …….
jcpescotosb hoy izy:
Ny rakitra tena tsara dia hanompo ahy betsaka ary hanontany izay angatahiko aho momba ny fomba hanovana ny fizarana fifamoivoizana sy ny haavon'ny UTM… Hotsapaiko amin'ny lalan-tsambo misokatra ity
Azo atao hoe manana diso ny comma sy teboka, io dia tokony hohamarinina ao amin'ny tontolon'ny fanaraha-maso, ireo faritra misy ao amin'ny faritra. Dia hiasa izany raha manana ireo teboka ianao ho fisarahana amina decimals sy commas ho fisarahana an'arivony.
GEMASA hoy izy:
Nanao fitsapana tao amin'ny Autocad 2009 aho ary niasa tsara fa tsy mikrosta
Raha ny marina dia tsy manao ny zavatra marina aho ao amin'ny Microstation V8 xm.
1. Baiko polyline
2. Manoratra 0,0 ianao
4. Kopia any amin'ny faritry ny loko marevaka
5. tsindrio ny baikon'ny baiko
6. paste na ctrl + v
7. Hanazava ny zoom
Raha tsy miasa izy dia misy zavatra hafahafa manodidina. Safidy iray hafa mety hisy fiantraikany dia ny komitrao sy ny fotoanao no misafotofoto amin'ny fisarahana an'arivony sy ny fanapaha-kevitra.
Iris hoy izy:
INONA NO HITRANGA AMIN'IZANY IREO MIKASIKA NY KOLONTSAINA MOMBA NY AUCTOCAD.
REHEFA MBA HITANAO AZO TOKONY HITANAO ARY HITANAO ARY ZAVA-PANAZAVANA INDRINDRA AN'ILAY MAIMAIM-PANAZAVANA IZY [Arc / Halfwidth / Length / Undo / Width
ARY MAVO AZO DIA OMISO ANAO ARY PEGO INDRINDRA IZAO ARY AZONAO IZAO (ETO 2D point na safidim-pahefana takiana) TSY MAINTSY HAMPIKAOKO AZO ATAO DIA METY POLYGON INDRINDRA AZO AZONAO AZO AZONAO AZO AZONAO VE IZAO IZAO AZO ATAO ARY IZANY AZO TOKONAO HATAO.
René, ny fandrindrana dia mivoaka satria efa niombon-kevitra voalohany isika.
RENE FABRICIO CASTRO hoy izy:
Heveriko fa avy amin'ireo torolalana ireo dia tsy afaka mandrindra ny fitaovana isika satria ireo torolàlana ireo dia tsy mifanaraka amin'ny rafitra ara-jeografika. fanomezana tsara ho an'ny fizarana koorda miaraka amin'ny takelaka
En Ity lahatsoratra ity Hitantsika ny fomba hanaovana izany amin'ny fomba hafa, manomboka amin'ny hevitra.
Ricardo hoy izy:
Tena miparitaka be, azo atao ve avy amin'ny polygon hanao latabatra miaraka amin'i Rumbos, Azimuth, Fampitana, Azimuth miaraka amin'ny fototra fantatra?